Ummeli Wommeli ePeoria IL | UThomas Howard | Shayela u-309-740-4033
Ikhaya I-Cannabis e-Illinois
O, sawubona wonke umuntu. Ngicabange ukuthi kungaba ngumqondo omuhle ukuthi mhlawumbe usondele kumbhobho. Kepha wozani lapha nizodlula ngokwenzeke izolo ebusuku eSkyfield, e-Illinois. Uyabona, i-Illinois empeleni yaqinisa insangu. Manje, uma ngithi i-Illinois isemthethweni insangu, ngicabanga ukuthi kufanele ngiyifanele. Isenethi sika-Illinois savota futhi saphasisa ukuqinisekiswa kwensangu ngokusemthethweni. Futhi ukuqinisekiswa ngokusemthethweni kwensangu yi-Illinois kwaba yi-HB1438. Futhi abanye abantu babebuza,
Imbewu yokuthengiswa kweCannabis- Ukuhambisana Nezidingo
Imboni ye-cannabis isekuncane, njengoba yabhaliswa ngokusemthethweni ngaphansi kweminyaka engama-20 eyedlule. Lokhu kungasho nje ukuthi imakethe iyakhula futhi ivela ngezinga eliphakeme. Ngenkathi lokhu kukhula bekungalawulwa ngandlela thile esikhathini esidlule, uhulumeni ungenile, futhi namhlanje, imboni ye-cannabis iphakathi kwezimboni ezilawulwa kakhulu.
Njengokusebenzela amandla aphezulu, umlando nakho konke okulungile emhlabeni, ummeli oqale le webhusayithi wabeka iminyaka yakhe yokuhlangenwe nakho komthetho webhizinisi ukuthi asebenze ukusiza ukulungisa okungalungile komlando lapho kuziwa ekuthini kuyi-cannabis.
Ngenkathi imithetho yase-Illinois isabeka icala ngokutholakala nensangu kwezokungcebeleka, umbuso uvumela ukuba nokusetshenziswa kwensangu yezokwelapha kulabo abaphethe ikhadi lensangu yezokwelapha. Abanakekeli bavunyelwe nokuhlakulela lesi sitshalo ukuze sisetshenziselwe ukwelashwa, yize kunokwenqatshelwa okuqinile kokungahanjiswa okufanayo kweziguli ngenzuzo.
Ufuna ukusebenzisana ngebhizinisi lakho le-cannabis?
Kusukela ngo-2015, sikholwa ukuthi lokhu sekufake ngokungafanele amabhizinisi e-cannabis medical, sibuze ukuthi singawasiza kanjani umugqa wakho ongezansi.